Ukulingana kwee-bulbs ze-LED. Funda ukukhetha okona kulungileyo ukugcina | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukulingana kwee-bulbs ze-LED
IsiJamani sasePortillo | | Ukonga umbane, Uqoqosho lwaseKhaya
Ngokuqinisekileyo uvile ngee-bulbs ze-LED kunye nokuncitshiswa kokusetyenziswa kombane. Itekhnoloji ikhula ngakumbi nangakumbi kwaye kufuneka sifunde ukonga zombini ekusebenziseni amandla nakwizinto esizikhuphayo esizivelisa emoyeni ngokusebenzisa la mandla. Kuqhelekile ukudideka ekuqaleni xa sithatha isigqibo sokuguqula iibhalbhu zokukhanya ekhayeni lethu kwii-LEDs. Zombini ezi Ibhalbhu efudumeleyo njengoko ukusetyenziswa okuncinci kungenzi ukonga kwaye kufuneka sazi kakuhle ukulingana kwee-bulbs ze-LED ukuphucula ukusetyenziswa kakuhle kwemali.
Kule nqaku siza kuchaza ngokweenkcukacha ukulingana kwee-bulbs ze-LED ngokubhekisele kwezinye iibhalbhu kwaye siza kukunika iingcebiso ukuze ugcine ngakumbi kwityala.
1 Ukutshintsha iibhalbhu ezindala ze-LED
2 Ukulingana kwee-bulbs ze-LED kunye neziqhelekileyo
3 Ukusebenza kakuhle kwezibane
4 Itheyibhile yokulingana
Ukutshintsha iibhalbhu ezindala ze-LED
Xa sibona umrhumo wombane kwiinyanga zokusetyenziswa okuphezulu, siphosa izandla zethu entloko. Kwaye kukukhanyisa kwendlu kuphela esikhumbula iphinki enkulu. Ngokulula nge Ngokutshintsha iibhalbhu zendlu, siya kuba sigcina imali eninzi. Kuyinyani ukuba, ekuqaleni, bathambekele ekubizeni ngaphezulu kune-incandescent okanye ezantsi-zokusebenzisa. Kodwa kulapho umahluko kumgangatho.
Ngelixa isibane esiqhelekileyo sokukhanya sisebenzisa kakhulu amandla aso kubushushu, Ii-LEDs ziyakwazi ukusebenza kumaqondo obushushu asezantsi. Zama ukuchukumisa ibhalbhu esebenzayo kwaye uyakubona ukuba kubanda kangakanani, ngelixa oqhelekileyo uzitshisile. Kuyimfuneko ukuguqula imeko yendlu yokukhanyisa ukuba sifuna ukwandisa ukusetyenziswa kwamandla. Ukuthenga zonke iibhalbhu esinazo ukusuka ngqo endlwini ukuya kwii-LED kunokuba kubiza kuqala (nangona kunjalo Apha unezibonelelo zokubafumana zitshiphu). Kuba iibhalbhu eziqhelekileyo zinobomi obufutshane, ngokulula singalinda ukuba zisekwe kwaye sizitshintshe nganye nganye.
Iibhalbhu ze-LED zinomgangatho ongcono kwaye zivelisa ukonga okubonakalayo kusetyenziso lombane. Oku kusinceda kakhulu kuba sinokusebenzisa umbane kwezinye izinto. Nangona kunjalo, xa kufikwa kutshintsho lweebhalbhu sizifumana sinengxaki ye watts. Kuya kufuneka sazi ukuba yeyiphi na into elingana neebhalbhu ze-LED ngokubhekisele kwezinye.
Amandla asuka kolunye uhlobo lwebhalbhu aye kolunye alungisiwe kwaye ngoku kufuneka sazi ukuba leliphi elilinganayo ukuze ukusetyenziswa kwethu kube sezantsi. Kuya kuba lilize ukutshintsha ibhalbhu ye-LED ukugcina imali ukuba siyithenga ngamandla aphezulu kunokuba kufanelekile.
Ukulingana kwee-bulbs ze-LED kunye neziqhelekileyo
Into yokuqala nephambili ekufuneka uyazi kukuba umbane wokukhanya kwezi bulbs zintsha awulinganiswa kwiiwatts. Eli linqanaba elitsha elibizwa ngokuba yiLumens okanye izibane. Eli nyathelo lizama ukusixelela ubungakanani bokukhanya okukhutshwe yibhalbhu ngeenjongo ezibonakalayo. Ukukhanya okungakumbi kwebhalbhu, kokukhona ukukhanya kuya kusinika. Oku kwenza umahluko omkhulu ngamandla ee-bulbs eziqhelekileyo ebomini.
Ngenxa yokuba ii-bulbs ze-LED zifuna amandla amancinci, ziphela zifuna amandla amancinci ukukhanyisa indawo efanayo. Zezona zibhalbhu zisebenza kakuhle kunye nezendalo ezikhoyo namhlanje. Yintoni egqithisile, Unoncedo lokungaqulathi izinto ezingcolisayo ekwenziweni kwawo, ezinje nge-mercury, okanye ezinye izinto ezinobungozi kunye neeradioactive.
Ugcino luveliswa ngenxa yento yokuba ayinasidingo sokuvelisa iibhlorho zeplasma okanye ukufudumeza imekyuri kwimeko ye-neon. Ijika nje kwangoko kwaye ayimoshi nayiphi na amandla engeyomfuneko.
Ukulingana kwebhalbhu akufuneki kuthathwe kancinci. Nokuba uyazi inkqubo yokulinganisa ii-watts, kubalulekile ukuba ube nesalathiso sokuba iyunithi yokulinganisa ayifani. Umenzi ngamnye unothotho lweempawu abazinika imveliso kwaye ziya kwahluka kubungakanani kunye nomgangatho wokukhutshwa kokukhanya. Gcina ukhumbula ukuba ayizizo zonke ii-bulbs ezingama-40W eziqhelekileyo ezikhuphisa isixa esifanayo okanye ubunzima bokukhanya.
Kwimeko yee-LEDs, ii-watts zibonisa kuphela imeko yokusetyenziswa kwebhalbhu, kodwa hayi ubungakanani bokukhanya abakukhuphayo.
Ukusebenza kakuhle kwezibane
Iyunithi yokulinganisa ye-lumens inxulumene nesixa sokukhanya esikhutshwe yibhalbhu kunye amandla ombane Utyisiwe, nto leyo ilinganiswa kwii-watts. Enye ipharamitha ethathelwa ingqalelo xa kusungulwa ukulingana nezinye iibhalbhu kukukhanya. Imalunga ne izikhanyiso ngemitha nganye yesikwere ekhutshwe yibhalbhu ekuthethwa ngayo. Ngokwesiqhelo iya kwahluka ngokuxhomekeka kubude apho ifakwe khona kunye nobungakanani bendawo esifuna ukukhanyisa kuyo.
Ngebhalbhu ye-LED ene I-5W sinokufikelela kwinqanaba elifanayo lokukhanyisa njengebhalbhu eqhelekileyo malunga ne-35-40 W. Ke ngoko, amandla ombane asetyenzisiweyo kwaye, emva kwayo yonke loo nto, indleko esiyivelisayo ikumyinge wama-85% ngaphantsi kweebhalbhu eziqhelekileyo.
Oku kunokubonwa ngcono kwitafile apho amaxabiso aqikelelweyo eentlobo ezahlukeneyo zeebhalbhu, amandla abo kunye nokukwazi ukukhanyisa kuqokelelwa. Ukulingana kunokuqinisekiswa malunga nazo zonke iintlobo zee-bulbs, ukusuka kwi-incandescent, ukuya kwi-halogen, nge-sodium, njl. Iibhalbhu ze-7W ze-LED zilingana ne-60W halogen eqhelekileyo.
Ukuba siphinda-phinda oku kugcinwa zizo zonke iibhalbhu esinazo endlwini kunye nexesha ezigcinwe kulo, ukonga yinto esebenzayo ngokwenene. Ukongeza, azivelisi ubushushu obongezelelekileyo (obuxatyiswa kakhulu ehlotyeni) kwaye zinobomi obude obude.
Apha sikushiya itafile kunye nazo zonke izinto ezibaluleke kakhulu apho unokuthelekisa khona ukuba ii-watts zebhalbhu ze-LED zithelekiswa njani nezinye ngokuchaseneyo. Ngale ndlela, ungayifumana ngokuchanekileyo xa kufikwa ekugcineni ukukhanya okuhle ekhaya, ukugcina kangangoko kunokwenzeka.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda ukuba ube nezimvo ezicace gca kwesi sihloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ukulingana kwee-bulbs ze-LED
Ing. URigoberto Ibargüen Fleitas sitsho
Nceda, ungathanda ukuba undicacisele ukuba injani inkqubo yokuvelisa umbane kumzi-mveliso ovelisa umbane osebenzisa iintsalela zezityalo (ummoba) okanye iinkuni, nezinto eziluncedo nezingalunganga ngokusetyenziswa kwawo.
Phendula u-Ing. Rigoberto Ibargüen Fleitas
Yintoni onokuyenza kuMhlaba?
Isixeko esomeleleyo kunye nokuhamba